स्थानीय तहमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा - Karobar National Economic Daily
स्थानीय तहमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा
query_builderMay 15, 2017 12:39 PM supervisor_accountकारोबार visibility752
काठमाडौंः पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्वसाधारणसँगै निजी क्षेत्रले पनि उत्साहपूर्वक मतदान गरेका छन् । तीन प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा व्यवसायीहरुले विहानैदेखि मतदान केन्द्र पुगेर सर्वसाधारणसँगै लाइन बसेर मताधिकारको प्रयोग गरेका छन् ।
फोब्र्सको अर्बपति सूचिमा सूचिकृत चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीले नवलपरासीको दुम्कौलिस्थित मतदान केन्द्रबाट मताधिकार प्रयोग गरे । मतदाता सूचिमा उनको नाम सीजी औद्योगिक ग्रामबाटै रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा आफ्नो प्रदेश नं. ५ मा तत्काल निर्वाचन नहुने भएकाले नेपालगन्जमै छिन् भने निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा विदेश भ्रमणमा भएकाले मतदान गरेनन् ।
अर्का पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य पनि मुलुकबाहिर छन् । तर नेपालमै भएकामध्ये अधिकांशले यो निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् । एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल विशालनगर पुगेर निर्वाचनमा सहभागी भए ।
उद्योग व्यवसायका लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्ने, विकेन्द्रीकरणले स्थानीय तहको विकास हुने उनको भनाइ थियो । “स्थानीय निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण हो,” उनले भने, “लामो समयदेखि स्थानीय तहमा व्यवसाय गर्न झेल्नु परेका समस्या अव कम हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।” महासंघकै जिल्ला नगर उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठ भने हाल म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा मेयरका लागि उम्मेदवारी दिएकाले उतै व्यस्त छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बाँसबारी केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचनले थप आशा जगाएको भन्दै स्थानीय निर्वाचनपछि नेपाल दोस्रो चरणमा अगाडी बढ्ने उनको अनुमान छ । निजी क्षेत्रमात्र नभएर समग्र देशको विकासका लागि समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ ।
अहिले स्थानीय स्तरमा सरकार नहुँदा कानुन भएर पनि नभएजस्तो अवस्था छ । जनताको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने उम्मेद्वारले जितेमा विकास सम्ंवभ भएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहमा उद्योग धन्दा, रोजगारी, आर्थिक विकास र सुसाशन र कानुनी शासन हुनुपर्नेे अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।
लगानीकर्तालाई पर्ने समस्या र लगानीको वातारण बनाउन जनप्रनिधिहरुले भुमिका खेल्ने उनको अपेक्षा छ । लगानीकर्ताप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन र स्थानीय तहमा विकास लागि स्थानिय निर्वाचन आवश्यक भएको उनको अनुभव छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले पनि बालुवाटारस्थित वडा नं. ४ बाट मतदान गरेका छन । उनका छोरा तथा महासंघ केन्द्रीय सदस्य प्रवलजंग पाण्डेसहित परिवारले मताधिकारको प्रयोग गरेको छ । “स्थानीय निकायको चुनाव भएको छ अब अधिकारसम्पन्न निकायका बन्नेछ त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रका लागि हुनुपर्ने निर्णय र कामहरु छिटो हुन्छन्,” इस्टर्न कसमस सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका प्रवल भन्छन्, “निर्वाचनले उद्योगधन्दा र व्यापारमा वृद्धि आउनुका साथै अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन्छ ।”
स्थानीय तहको चुनावले समग्र उद्यम व्यवसायका लागि सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिको अभावमा १५ वर्षदेखि बेलगाम छोडिएको स्थानीय तहले अब सवल र सक्षम नेतृत्व पाउने र ति निकाय पनि अधिकारसम्पन्न हुने भएकाले आम सर्वसाधारणसँगै निजी क्षेत्र पनि उत्साही देखिएको हो ।
केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाका कारण सानो समस्याको समाधानका लागि समेत माथिल्लो निकायको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाका कारण सेवाग्राही मर्कामा थिए । निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना समस्या सुनाउने निकाय पाएको बताएका छन् ।
अबका स्थानीय तह सिंहदरवारजत्तिकै प्रभावकारी र शक्तिशाली हुने छन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा आर्थिक गतिविधि समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसायीहरुले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह हुनुका साथै काुननी राज्य चल्ने भएकोले उद्यम व्यवसायका लागि अव स्थानीय तह सहयोगी हुने बताएका छन् ।
उद्योग स्थानीय तह